ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ – Shangyimm
သားအိမျကငျဆာတောငျ ပြောကျတယျဆိုတဲ့ နညျး
Posted on October 14, 2021 October 14, 2021 by Tin Mg Shwe
တို့အမအေတှကျ ဆေးတှေ အမြားကွီး ရောကျလာပါပွီ….
အမကေ သားအိမျကငျဆာကို နှဈရှညျလမြား ခံစားနရေတာပါ၊ ဆေးသှငျးလိုကျ ဓာတျကငျလိုကျနဲ့ ဆေးရုံမပွတျ တကျလိုကျ ဆငျးလိုကျနဲ့ ဆရာဝနျစုံအောငျ ကုလာရငျးကပဲ ကငျဆာရောဂါကတော့ တနတေ့ခွား တတိတိနဲ့တိုး လာတာ အခုတော့ အဆငျ့လှနျ ဆိုပီး သမားတျော ကလညျး ခီမို ထပျသှငျးဖို့ တောငျ လကျမခံတော့ပါဘူး။
ဓာတျရောငျခွညျလညျး တခေါကျကို ၃၅ ကွိမျစီ ၂ကွော့ပွနျ ကငျထားပီမို့ ထပျကငျလို့ လညျး မရတော့ဘူးတဲ့ တိုငျးရငျးဆေးလေးတှေ သောကျကွညျ့ သင်ျဘောရှကျထောငျး သောကျကွညျ့ဖို့ အကွံပေးပွီးအိပျဆေးနဲ့ သှေးတိတျဆေး နာကငျြပြောကျဆေးတှပေဲ ပေးပါတော့တယျ။
အဲ့လိုနဲ့ ဟိုမေးဒီမေး မေးကွရငျးက ပွညျက အမ တဝမျးကှဲဆီက ကွားတဲ့ ဆေးက လယျပုဇှနျလုံး (ဂဏာနျးလုံး) ကို ပေါကျပနျးဖွူရှကျနဲ့ ခကျြစား ရမယျ။ ဇီးဖွူသီး ပွုတျရညျ နဲ့ ဖနျရဆေေးတာ ပွုတျရညျထဲ ဝငျစိမျတာ လုပျပေးရမယျတဲ့။
လကျတှေ့ ပြောကျသှားတဲ့ အမြိုးသမီးက ပေးလိုကျ တဲ့ ဆေးနညျးပါ….
အဲဒါနဲ့ ခကျြလဲစားရော ၃ရကျအတှငျး သှေးဆငျးတာ ရပျသှားတာ အခုထိပါပဲ။ အရငျကသှေးတိတျဆေး မပွတျသောကျနတောကို မရပျလို့ သမားတျောက အစာအိမျနဲ့ အူလမျးကွောငျးဆရာဝနျဆီသှား မှနျပွောငျးကွညျ့ ဗိုကျခှဲ ဆီးအိတျ ဝမျးအိတျ ထုတျထားဖို့တောငျ အကွံပွုနပေါပွီ။
ဇီးဖွူသီးပွုတျရညျ ကလဲ ကောငျးပါတယျ အမကေ မစိမျနိုငျလို့ ရခြေိုးတာ ဖနျရဆေေးတာလေးတှေ လုပျရုံနဲ့ တောငျ ဆယျရကျအတှငျး အကြိတျတှနေဲ့ ရောငျရမျးပွီး အသားမာကွီး ဖွဈနတေဲ့ ဗိုကျကော ပေါငျတှကေော အကြိတျတှေ ပြောကျပွီးခပျြရပျသေးကြုံ့ပွီး ပြော့ဖတျသှားပါပွီ။ ခွတှေလေကျတှေ ဖောရောငျနတောလဲ အကုနျပြောကျပွီး အသားအရေ စိုပွလောပါပွီ။ အမလေို့ပဲ ကငျဆာရောဂါဝဒေနာသညျတှေ ဒီစာလေးဖတျပွီး အနာနဲ့ ဆေးတှစေ့ခေငျြလို့ FB ပျေါဒီpostလေး ရေးတငျ လိုကျတာပါ။
အမကေတော့ နောကျဆုံးအဆငျ့ ရောကျတဲ့ အထိ ၆နှဈကွာမှ ဆေးတှရေ့တော့ ပြောကျဖို့တော့ သိပျ မမြှျောလငျ့ နိုငျပါဘူး…. ရောဂါခံစားရ သကျသာပွီး အသကျရှညျရှညျလေး နနေိုငျဖို့ပဲ အစှမျးကုနျု ကွိုးစား နကွေရတာ။ ဒါ ပမေဲ့ ရောဂါနုသူ ဆို လုံးဝ ပြောကျသှားမယျလို့ ထငျပါတယျရှငျ။
တို့အမေအတွက် ဆေးတွေ အများကြီး ရောက်လာပါပြီ….
အမေက သားအိမ်ကင်ဆာကို နှစ်ရှည်လများ ခံစားနေရတာပါ၊ ဆေးသွင်းလိုက် ဓာတ်ကင်လိုက်နဲ့ ဆေးရုံမပြတ် တက်လိုက် ဆင်းလိုက်နဲ့ ဆရာဝန်စုံအောင် ကုလာရင်းကပဲ ကင်ဆာရောဂါကတော့ တနေ့တခြား တတိတိနဲ့တိုး လာတာ အခုတော့ အဆင့်လွန် ဆိုပီး သမားတော် ကလည်း ခီမို ထပ်သွင်းဖို့ တောင် လက်မခံတော့ပါဘူး။
ဓာတ်ရောင်ခြည်လည်း တခေါက်ကို ၃၅ ကြိမ်စီ ၂ကြော့ပြန် ကင်ထားပီမို့ ထပ်ကင်လို့ လည်း မရတော့ဘူးတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးလေးတွေ သောက်ကြည့် သင်္ဘောရွက်ထောင်း သောက်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးပြီးအိပ်ဆေးနဲ့ သွေးတိတ်ဆေး နာကျင်ပျောက်ဆေးတွေပဲ ပေးပါတော့တယ်။
အဲ့လိုနဲ့ ဟိုမေးဒီမေး မေးကြရင်းက ပြည်က အမ တဝမ်းကွဲဆီက ကြားတဲ့ ဆေးက လယ်ပုဇွန်လုံး (ဂဏာန်းလုံး) ကို ပေါက်ပန်းဖြူရွက်နဲ့ ချက်စား ရမယ်။ ဇီးဖြူသီး ပြုတ်ရည် နဲ့ ဖန်ရေဆေးတာ ပြုတ်ရည်ထဲ ဝင်စိမ်တာ လုပ်ပေးရမယ်တဲ့။
လက်တွေ့ ပျောက်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးက ပေးလိုက် တဲ့ ဆေးနည်းပါ….
အဲဒါနဲ့ ချက်လဲစားရော ၃ရက်အတွင်း သွေးဆင်းတာ ရပ်သွားတာ အခုထိပါပဲ။ အရင်ကသွေးတိတ်ဆေး မပြတ်သောက်နေတာကို မရပ်လို့ သမားတော်က အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆရာဝန်ဆီသွား မှန်ပြောင်းကြည့် ဗိုက်ခွဲ ဆီးအိတ် ဝမ်းအိတ် ထုတ်ထားဖို့တောင် အကြံပြုနေပါပြီ။
ဇီးဖြူသီးပြုတ်ရည် ကလဲ ကောင်းပါတယ် အမေက မစိမ်နိုင်လို့ ရေချိုးတာ ဖန်ရေဆေးတာလေးတွေ လုပ်ရုံနဲ့ တောင် ဆယ်ရက်အတွင်း အကျိတ်တွေနဲ့ ရောင်ရမ်းပြီး အသားမာကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ဗိုက်ကော ပေါင်တွေကော အကျိတ်တွေ ပျောက်ပြီးချပ်ရပ်သေးကျုံ့ပြီး ပျော့ဖတ်သွားပါပြီ။ ခြေတွေလက်တွေ ဖောရောင်နေတာလဲ အကုန်ပျောက်ပြီး အသားအရေ စိုပြေလာပါပြီ။ အမေ့လိုပဲ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာသည်တွေ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး အနာနဲ့ ဆေးတွေ့စေချင်လို့ FB ပေါ်ဒီpostလေး ရေးတင် လိုက်တာပါ။
အမေကတော့ နောက်ဆုံးအဆင့် ရောက်တဲ့ အထိ ၆နှစ်ကြာမှ ဆေးတွေ့ရတော့ ပျောက်ဖို့တော့ သိပ် မမျှော်လင့် နိုင်ပါဘူး…. ရောဂါခံစားရ သက်သာပြီး အသက်ရှည်ရှည်လေး နေနိုင်ဖို့ပဲ အစွမ်းကုန်ု ကြိုးစား နေကြရတာ။ ဒါ ပေမဲ့ ရောဂါနုသူ ဆို လုံးဝ ပျောက်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ရှင်။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on သားအိမျကငျဆာတောငျ ပြောကျတယျဆိုတဲ့ နညျး
နှဈခြို့နတေဲ့ အမာရှတျဟောငျးတှကေို ပြောကျကငျးသှားစမေယျ့ လြှို့ဝှကျခကျြ (၅)မြိုး
Posted on October 13, 2021 October 13, 2021 by Tin Mg Shwe
အမာရှတျတှရှေိလို့ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု ကငျးမဲ့နပေါ လား။ ဒါဆိုရငျတော့ ဒီနကေ့စပွီး ပြျောလိုကျပါတော့။ နှဈ ခြို့နတေဲ့ အမာရှတျတှေ ဝကျခွံ အမာရှတျတှေ – ခွထေောကျက အမာရှတျတှနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျပျေါ က အမာရှတျ မှနျသမြှ ကိုပြောကျကငျးသကျသာသှားစမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သံပုယိုရညျကို ရအေနညျးငယျ ရောလိုကျပါ။ ရလာတဲ့ သံပုယိုရညျကို ဂှမျးစလေးနဲ့ တို့ပွီး အမာရှတျတှပေျေါမှာ လိမျးပေးလိုကျပါ။ ခွောကျသှားတဲ့အထိ ထားပွီးရငျ ရဆေေးပေးလိုကျရုံပါပဲ။ ဒီနညျးလမျးလေးကို လုပျပွီးပွီးခငျြး နရေောငျအောကျကို မထှကျပါနဲ့။ ထှကျမယျဆိုလညျး နရေောငျကာခရငျမျ လိမျးပေးပါ။
ပြားရညျနဲ့ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါတို့ကို သသေခြောခြာ ရောမှပေေးပွီး အမာရှတျတှပေျေါကိုလိမျးလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ၅မိနဈခနျ့နှပျထားလိုကျပါ။ အဲ့ဒီ့အပျေါကနေ တဘကျကို ရနှေေးမှာစိမျ၊ ညှဈပွီး အုပျထားလိုကျပါ။ တဘကျအေးသှားပွီဆိုရငျ
ကွကျသှနျနီကို ကွိတျပွီး အရညျညှဈလိုကျပါ။ ရလာတဲ့အရညျကို အမာရှတျတှပေျေါမှာလိမျးပွီး ခွောကျသှားတဲ့အထိထားပါ။ ၁၅ မိနဈခနျ့အကွာမှာ ရဆေေးပေးလိုကျရုံပါပဲ။
ရှားစောငျးလကျပပျအနှဈကို လိုးရှငျးလိုပဲ အသားထဲ စိမျ့ဝငျသှားအောငျ နစေ့ဉျပုံမှနျ လိမျးပေးရမှာပါ။ ပွနျလညျဆေးကွောပေးစရာ မလိုပါဘူး။
လကျဖကျဆီနဲ့ သံလှငျဆီကိုရောပွီး ညအိပျရာမဝငျခငျတိုငျး အမာရှတျတှပေျေါကို လိမျးပေးပါ။ ရပွေနျဆေးစရာမလိုပါဘူး။ တဈညလုံးထားလိုကျပါ။
နှစ်ချို့နေတဲ့ အမာရွတ်ဟောင်းတွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅)မျိုး
အမာရွတ်တွေရှိလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နေပါ လား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ကစပြီး ပျော်လိုက်ပါတော့။ နှစ် ချို့နေတဲ့ အမာရွတ်တွေ ဝက်ခြံ အမာရွတ်တွေ – ခြေထောက်က အမာရွတ်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် က အမာရွတ် မှန်သမျှ ကိုပျောက်ကင်းသက်သာသွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သံပုယိုရည်ကို ရေအနည်းငယ် ရောလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ သံပုယိုရည်ကို ဂွမ်းစလေးနဲ့ တို့ပြီး အမာရွတ်တွေပေါ်မှာ လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားတဲ့အထိ ထားပြီးရင် ရေဆေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီနည်းလမ်းလေးကို လုပ်ပြီးပြီးချင်း နေရောင်အောက်ကို မထွက်ပါနဲ့။ ထွက်မယ်ဆိုလည်း နေရောင်ကာခရင်မ် လိမ်းပေးပါ။
ပျားရည်နဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါတို့ကို သေသေချာချာ ရောမွှေပေးပြီး အမာရွတ်တွေပေါ်ကိုလိမ်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ၅မိနစ်ခန့်နှပ်ထားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီ့အပေါ်ကနေ တဘက်ကို ရေနွေးမှာစိမ်၊ ညှစ်ပြီး အုပ်ထားလိုက်ပါ။ တဘက်အေးသွားပြီဆိုရင်
ကြက်သွန်နီကို ကြိတ်ပြီး အရည်ညှစ်လိုက်ပါ။ ရလာတဲ့အရည်ကို အမာရွတ်တွေပေါ်မှာလိမ်းပြီး ခြောက်သွားတဲ့အထိထားပါ။ ၁၅ မိနစ်ခန့်အကြာမှာ ရေဆေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်ကို လိုးရှင်းလိုပဲ အသားထဲ စိမ့်ဝင်သွားအောင် နေ့စဉ်ပုံမှန် လိမ်းပေးရမှာပါ။ ပြန်လည်ဆေးကြောပေးစရာ မလိုပါဘူး။
လက်ဖက်ဆီနဲ့ သံလွင်ဆီကိုရောပြီး ညအိပ်ရာမဝင်ခင်တိုင်း အမာရွတ်တွေပေါ်ကို လိမ်းပေးပါ။ ရေပြန်ဆေးစရာမလိုပါဘူး။ တစ်ညလုံးထားလိုက်ပါ။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ, ဗဟုတုသ LeaveaComment on နှဈခြို့နတေဲ့ အမာရှတျဟောငျးတှကေို ပြောကျကငျးသှားစမေယျ့ လြှို့ဝှကျခကျြ (၅)မြိုး
ဂေါကျရောဂါ အဆဈရောငျရောဂါအတှကျ သဘာဝဆေးတလကျ
Posted on October 12, 2021 October 12, 2021 by Tin Mg Shwe
သငျ့ခံစားနရေတဲ့ ဂေါကျရောဂါ၊ အဆဈရောငျရောဂါတှေ ဖွဈပှားရခွငျးရဲ့ အဓိက အကွောငျးအရာက ယူရဈအကျဆဈကိုယျထဲမှာ မြားနလေို့ ဖွဈရတာပါတဲ့။ ဒီဆေးနညျးလေးကတော့ ဂေါကျရောဂါသာမက အစာအိမျနာရောဂါ၊ခြောငျးဆိုးရောဂါတှကေိုပါ ပြောကျကငျးစပေါတယျ။ Mr. Liuရဲ့ လကျတှေ့ သောကျသုံးပွီး ပြောကျကငျးထားတဲ့ ဆေးနညျးတဈလကျပါ။ သူရော သူ့အသိမိတျဆှပေါ လကျတှသေ့ောကျသုံးပွီး ရောဂါဝဒေနာခံစားရမှု့မှ ကငျးဝေးပါတယျတဲ့။ဘေးအန်တရယျ မဖွဈစတေဲ့ သဘာဝ အံသွဖှယျ ဆေးတဈလကျလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ ဦးဝိနယမှ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
၁။ သင်ျဘောသီးအစိမျးတဈလုံးကို ထိပျမှာ လှီးဖွတျထားပါ။
၂။ အထဲမှာရှိတဲ့ သင်ျဘောအစိတှကေို ဖယျထုတျလိုကျပါ။
၃ ။ ပွီးရငျတော့ဆူပှကျနတေဲ့ ရနှေေးမြားကို အထဲမှာ လောငျးထညျ့လိုကျပါ။
၄ ။ လကျဖကျခွောကျအနညျးငယျကို ထညျ့ထားပါ။
၅။ လှီးထားတဲ့ ထိပျပိုငျးနဲ့ ခဏလောကျပွနျပိတျထားပါ။ ဖှငျ့ရလှယျကူအောငျ သှားကွားထိုးတံလေးနဲ့ထိပျကို ထိုးထားရငျ ပိုပွီး အဆငျပွပေါတယျ။
ဒီ သင်ျဘောသီးစိမျး လကျဖကျရညျနှေးကို နစေ့ဉျသောကျသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ယူရဈအကျဆဈမွငျ့မားမှု့ကွောငျ့ ခံစားနရေတဲ့ ဂေါကျရောဂါ၊ အဆဈရောငျရောဂါတှကေို၊ သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။
သငျ့ရဲ့ ယူရဈအကျဆဈ ပုံမှနျအခွအေနဖွေဈသှားရငျတော့ ရောဂါဟောငျးဖွဈပှားမှု့မှ ရှောငျရှားရနျ တဈလကို ၁-၃ ကွိမျထိ သောကျသုံးပေးပါ။ မိတျဆှမြေားအားလုံးရောဂါကငျးဝေးပွီး ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစနေျော။ ဦးဝိနယတော့ လကျတှသေ့ောကျသုံးနပေါပွီ ။ သင်ျဘောသီးလေးက ရနှေေးမာ့ခှကျတခှကျစာ ကှကျတိဆနျ့တာမို့ တျောတျောလေးကို အဆငျပွပေါတယျဗြား။
Credit-ဦးဝိနယ(နတျမောကျနယျဘှား) အညာသား ထနျးပငျကုနျးကွီးရှာသား 2.7.2021
Via… sai min thant
ဂေါက်ရောဂါ အဆစ်ရောင်ရောဂါအတွက် သဘာဝဆေးတလက်
သင့်ခံစားနေရတဲ့ ဂေါက်ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာက ယူရစ်အက်ဆစ်ကိုယ်ထဲမှာ များနေလို့ ဖြစ်ရတာပါတဲ့။ ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ ဂေါက်ရောဂါသာမက အစာအိမ်နာရောဂါ၊ချောင်းဆိုးရောဂါတွေကိုပါ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ Mr. Liuရဲ့ လက်တွေ့ သောက်သုံးပြီး ပျောက်ကင်းထားတဲ့ ဆေးနည်းတစ်လက်ပါ။ သူရော သူ့အသိမိတ်ဆွေပါ လက်တွေ့သောက်သုံးပြီး ရောဂါဝေဒနာခံစားရမှု့မှ ကင်းဝေးပါတယ်တဲ့။ဘေးအန္တရယ် မဖြစ်စေတဲ့ သဘာဝ အံသြဖွယ် ဆေးတစ်လက်လည်း ဖြစ်တာကြောင့် ဦးဝိနယမှ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
၁။ သင်္ဘောသီးအစိမ်းတစ်လုံးကို ထိပ်မှာ လှီးဖြတ်ထားပါ။
၂။ အထဲမှာရှိတဲ့ သင်္ဘောအစိတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။
၃ ။ ပြီးရင်တော့ဆူပွက်နေတဲ့ ရေနွေးများကို အထဲမှာ လောင်းထည့်လိုက်ပါ။
၄ ။ လက်ဖက်ခြောက်အနည်းငယ်ကို ထည့်ထားပါ။
၅။ လှီးထားတဲ့ ထိပ်ပိုင်းနဲ့ ခဏလောက်ပြန်ပိတ်ထားပါ။ ဖွင့်ရလွယ်ကူအောင် သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ထိပ်ကို ထိုးထားရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီ သင်္ဘောသီးစိမ်း လက်ဖက်ရည်နွေးကို နေ့စဉ်သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့်ယူရစ်အက်ဆစ်မြင့်မားမှု့ကြောင့် ခံစားနေရတဲ့ ဂေါက်ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်ရောဂါတွေကို၊ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ယူရစ်အက်ဆစ် ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်သွားရင်တော့ ရောဂါဟောင်းဖြစ်ပွားမှု့မှ ရှောင်ရှားရန် တစ်လကို ၁-၃ ကြိမ်ထိ သောက်သုံးပေးပါ။ မိတ်ဆွေများအားလုံးရောဂါကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာပျော်ရွင်တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။ ဦးဝိနယတော့ လက်တွေ့သောက်သုံးနေပါပြီ ။ သင်္ဘောသီးလေးက ရေနွေးမာ့ခွက်တခွက်စာ ကွက်တိဆန့်တာမို့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်ဗျား။
Credit-ဦးဝိနယ(နတ်မောက်နယ်ဘွား) အညာသား ထန်းပင်ကုန်းကြီးရွာသား 2.7.2021
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ဂေါကျရောဂါ အဆဈရောငျရောဂါအတှကျ သဘာဝဆေးတလကျ
Posted on October 11, 2021 October 11, 2021 by Tin Mg Shwe
သူမြားတှကေ Online Shop မှာ ဈေးကွီးပေးရတဲ့ ရှားစောငျးလကျပတျယို လုပျနညျးကို အခမဲ့ မြှဝပေေးပါမယျ။ အဈမတဈယောကျက ရှားစောငျးလကျပတျယိုလေး တငျထားတာတှလေို့ ညီမလညျး ပွနျရှယျပါရစနေျော။ ဝတဲ့သူတှေ ဒါမှမဟုတျ ဗိုကျပူတဲ့သူတှအေတှကျ အရမျးအဆငျပွတေယျ။ အိမျရှငျမ တျောတျောမြားမြားရဲ့ ဒုက်ခက ဗိုကျပူတာပါပဲ။ ညီမလေ အဲ့ယိုလုပျနညျးကို မမေကေတဆငျ့ သိတာပါ။
စားကွညျ့တော့ တကယျ ဗိုကျကတြယျရှငျ့။ ရှားစောငျးလကျပတျ ငါးတကျလောကျကို ဘေးကစူးသှားတှကေို ဓားနဲ့ခှာပီး လကျတဈဆဈလောကျလေး တှကေိုလှီးပါ(အခှံမနှာတော့ ထုပျထုပျထုပျ နဲ့ စားလို့ကောငျးသလို ပိုဆေးဖကျဝငျတာပေါ့)ထနျးလကျြ(အညို) ငါးကပျြသားလောကျကို ဆီ ၅ ကပျြသားလောကျထဲကို ထညျ့ပီး အရညျပြျောအောငျမှပေါ။ ထနျးလကျြ အရညျပြျောသှားရငျ ရှားစောငျးလကျပတျထညျ့ပါ။ ရှားစောငျး လတျပတျက အရညျထှကျတဲ့အတှကျ ခနခန မှပေေးပါ။
ရှားစောငျးလကျပတျ အရညျခမျးသှားပီး နညျးနညျးခပျပဈြပဈြ ဖွဈလာရငျ ငှကျပြောသီးဖီးကွမျး နှဈလုံးကို ပါးပါးလှီးထညျ့ပါ။(ငှကျပြောသီးက မြားလြှငျ ခဉျြတတျလို့ နှဈလုံးဆို လုံလောကျပါပွီ)ကွကျဥနှဈလုံးကို မှပေီးမှထညျ့ပါ။ ဇှနျးနဲ့ အဆကျမပွတျမှပေေးပါ ကပျသှားနိုငျတဲ့အတှကျ ကွောငျ့ပါ။ ပွီးရငျ တကယျကို အရသာရှိတဲ့ ရှားစောငျးလတျပတျယိုလေးရပါပွီရှငျ။ အဖုံးလုံတဲ့ ပုလငျးလေးထဲကို ထညျ့သိမျးပွီး စားလို့ရပါပွီ။ ညီမအစက ထငျထားတာတာက ဆီတှလေညျးမြားတယျ ကွကျဥ၊ ငှကျပြောသီးရောဆိုတော့ ဝိတျတကျမှာပဲလို့ ထငျထားတာ။ ဒါပမေယျ့ တကယျစားကွညျ့တော့ ဝမျးလညျးမှနျသလို မိနျးကလေးတှနေဲ့ပတျသတျတဲ့ ရောဂါတှကေိုလညျးကာကှယျပေးတယျဆိုတော့ စားရကြိုးနပျပီပေါ့နျော။
သူများတွေက Online Shop မှာ ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ယို လုပ်နည်းကို အခမဲ့ မျှဝေပေးပါမယ်။ အစ်မတစ်ယောက်က ရှားစောင်းလက်ပတ်ယိုလေး တင်ထားတာတွေ့လို့ ညီမလည်း ပြန်ရှယ်ပါရစေနော်။ ဝတဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် ဗိုက်ပူတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ အိမ်ရှင်မ တော်တော်များများရဲ့ ဒုက္ခက ဗိုက်ပူတာပါပဲ။ ညီမလေ အဲ့ယိုလုပ်နည်းကို မေမေကတဆင့် သိတာပါ။
စားကြည့်တော့ တကယ် ဗိုက်ကျတယ်ရှင့်။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ငါးတက်လောက်ကို ဘေးကစူးသွားတွေကို ဓားနဲ့ခွာပီး လက်တစ်ဆစ်လောက်လေး တွေကိုလှီးပါ(အခွံမနွှာတော့ ထုပ်ထုပ်ထုပ် နဲ့ စားလို့ကောင်းသလို ပိုဆေးဖက်ဝင်တာပေါ့)ထန်းလျက်(အညို) ငါးကျပ်သားလောက်ကို ဆီ ၅ ကျပ်သားလောက်ထဲကို ထည့်ပီး အရည်ပျော်အောင်မွှေပါ။ ထန်းလျက် အရည်ပျော်သွားရင် ရှားစောင်းလက်ပတ်ထည့်ပါ။ ရှားစောင်း လတ်ပတ်က အရည်ထွက်တဲ့အတွက် ခနခန မွှေပေးပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ် အရည်ခမ်းသွားပီး နည်းနည်းခပ်ပျစ်ပျစ် ဖြစ်လာရင် ငှက်ပျောသီးဖီးကြမ်း နှစ်လုံးကို ပါးပါးလှီးထည့်ပါ။(ငှက်ပျောသီးက များလျှင် ချဉ်တတ်လို့ နှစ်လုံးဆို လုံလောက်ပါပြီ)ကြက်ဥနှစ်လုံးကို မွှေပီးမှထည့်ပါ။ ဇွန်းနဲ့ အဆက်မပြတ်မွှေပေးပါ ကပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် ကြောင့်ပါ။ ပြီးရင် တကယ်ကို အရသာရှိတဲ့ ရှားစောင်းလတ်ပတ်ယိုလေးရပါပြီရှင်။ အဖုံးလုံတဲ့ ပုလင်းလေးထဲကို ထည့်သိမ်းပြီး စားလို့ရပါပြီ။ ညီမအစက ထင်ထားတာတာက ဆီတွေလည်းများတယ် ကြက်ဥ၊ ငှက်ပျောသီးရောဆိုတော့ ဝိတ်တက်မှာပဲလို့ ထင်ထားတာ။ ဒါပေမယ့် တကယ်စားကြည့်တော့ ဝမ်းလည်းမှန်သလို မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတော့ စားရကျိုးနပ်ပီပေါ့နော်။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on Online မှာ ဈေးကွီးပေးဝယျနကွေတဲ့ အဆီကြ ရှားစောငျးလကျပတျယို လုပျနညျး
သှားစရာလာစရာရှိလို့ အမွနျဝိတျကခြငျြသူမြားအတှကျ သုံးရကျနဲ့ ဝိတျခနြညျး
Posted on October 9, 2021 October 9, 2021 by Tin Mg Shwe
ဒီနညျးနဲ့ ဝိတျခရြငျ သုံးရကျအတှငျး သုံးပေါငျထကျမက ကနြိုငျတယျ။ စားသောကျရမယျ့ရကျကလညျး သုံးရကျတညျးသာ ဖွဈတယျ။ ကစီဓာတျကို လုံးဝလြှော့ခပြွီး အသီးနဲ့ အသားကို အစားထိုးစားသောကျစတော ဖွဈတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးမပါလို့ လိုကျလုပျသူတှေ သဘောကကြွမယျ။ အာဟာရဓာတျကို ကယျလိုရီ ၁၀၀၀ လောကျသာ ဝငျစတေယျ။ green tea လကျဖကျစိမျးရညျ အမွဲသောကျဖို့ လိုတယျ။ ရကွေိုကျသလောကျ သောကျနိုငျတယျ။ ကနျြတာကတော့ ကွကျဥကို အဓိက စားသောကျရတာဖွဈတယျ။
ပထမရကျတှငျ မနကျစာ အတှကျ ကွကျဥပွုတျ နှဈလုံး၊ ခရမျးခဉျြသီးနှဈလုံး၊ Green tea တခှကျသောကျပါ။ နလေ့ညျစာ အတှကျ ကွကျဥအကာ နှဈလုံး၊ ငါး လကျတဖဝါးစာ၊ Green tea တခှကျသောကျပါ။ ညနေ အစာပွေ ပနျးသီးနဲ့ ညစာ အတှကျကိုတော့ ခါကွကျဥ၊ ပနျးမုနျလာ၊ မုနျလာထုပျ၊ ပဲသီးတောငျ့ အကွျော၊ Green tea တခှကျသောကျပါ။
ဒုတိယရကျတှငျ မနကျစာ အတှကျ ကွကျဥပွုတျ နှဈလုံး၊ ငှကျပြောသီးနှဈလုံး၊ Green tea တခှကျ သောကျပါ။ နလေ့ညျစာအတှကျ ကွကျဥအကာ နှဈလုံး၊ကွကျသား လကျတဖဝါးစာ၊ Green tea တခှကျသောကျပါ။ ညနေ အစာပွကေတော့ ဒုတိယရကျနဲ့ တတိယရကျတှပေါ လုံးဝမစားရတော့ပါ။ ညစာ အတှကျ ကိတျ(၁)ခပျြ၊ အဆီထုတျထားတဲ့ နှားနို့တခှကျသောကျပါ။
ကွကျဥပွုတျတလုံးမှာ ကယျလိုရီ (၁၅၀)လောကျပါတယျ။ အသားကနေ ကယျလိုရီ (၁၂၀-၁၆၀)ကွား ဝငိနတေယျ။ ပနျးသီးတလုံးမှာ ကယျလိုရီ ၁၀၀ လောကျပါတယျ။ စုစုပေါငျး ကယျလိုရီ (၁၀၀၀)လောကျသာ နစေ့ဉျဝငျနတေယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သုံးရကျပွီးရငျ ဆကျမလုပျပါနဲ့။ ရကျအနညျးငယျခွားပါ။ အသကျကွီးရငျ့သူတှလေုပျတဲ့အခါ သတိထားသငျ့တယျ။ လူငယျလူရှယျတှေ လိုကျလုပျနိုငျတယျ။ သခြောလုပျနိုငျရငျ သုံးရကျအတှငျး ၃-၆ပေါငျထိ ဝိတျကစြနေိုငျတယျ။ အမွနျဝိတျခနြညျးဖွဈလို့ ဝိတျကဖြို့အတှကျ အခြိနျလညျးပေးနိုငျ အလငျြလညျး မလိုဘူးဆိုရငျတော့ ကိုယျနဲ့ကိုကျညီမယျ့ ဝိတျခနြညျးကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
သွားစရာလာစရာရှိလို့ အမြန်ဝိတ်ကျချင်သူများအတွက် သုံးရက်နဲ့ ဝိတ်ချနည်း
ဒီနည်းနဲ့ ဝိတ်ချရင် သုံးရက်အတွင်း သုံးပေါင်ထက်မက ကျနိုင်တယ်။ စားသောက်ရမယ့်ရက်ကလည်း သုံးရက်တည်းသာ ဖြစ်တယ်။ ကစီဓာတ်ကို လုံးဝလျှော့ချပြီး အသီးနဲ့ အသားကို အစားထိုးစားသောက်စေတာ ဖြစ်တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမပါလို့ လိုက်လုပ်သူတွေ သဘောကျကြမယ်။ အာဟာရဓာတ်ကို ကယ်လိုရီ ၁၀၀၀ လောက်သာ ဝင်စေတယ်။ green tea လက်ဖက်စိမ်းရည် အမြဲသောက်ဖို့ လိုတယ်။ ရေကြိုက်သလောက် သောက်နိုင်တယ်။ ကျန်တာကတော့ ကြက်ဥကို အဓိက စားသောက်ရတာဖြစ်တယ်။
ပထမရက်တွင် မနက်စာ အတွက် ကြက်ဥပြုတ် နှစ်လုံး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်လုံး၊ Green tea တခွက်သောက်ပါ။ နေ့လည်စာ အတွက် ကြက်ဥအကာ နှစ်လုံး၊ ငါး လက်တဖဝါးစာ၊ Green tea တခွက်သောက်ပါ။ ညနေ အစာပြေ ပန်းသီးနဲ့ ညစာ အတွက်ကိုတော့ ခါကြက်ဥ၊ ပန်းမုန်လာ၊ မုန်လာထုပ်၊ ပဲသီးတောင့် အကြော်၊ Green tea တခွက်သောက်ပါ။
ဒုတိယရက်တွင် မနက်စာ အတွက် ကြက်ဥပြုတ် နှစ်လုံး၊ ငှက်ပျောသီးနှစ်လုံး၊ Green tea တခွက် သောက်ပါ။ နေ့လည်စာအတွက် ကြက်ဥအကာ နှစ်လုံး၊ကြက်သား လက်တဖဝါးစာ၊ Green tea တခွက်သောက်ပါ။ ညနေ အစာပြေကတော့ ဒုတိယရက်နဲ့ တတိယရက်တွေပါ လုံးဝမစားရတော့ပါ။ ညစာ အတွက် ကိတ်(၁)ချပ်၊ အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့တခွက်သောက်ပါ။
တတိယရက်တွင် မနက်စာ အတွက် ကြက်ဥပြုတ် နှစ်လုံး၊ ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်သောက်ပါ။ နေ့လည်စာအတွက် ကြက်ဥအကာ နှစ်လုံး၊ကြက်သား လက်တဖဝါးစာ၊ Green tea တခွက်သောက်ပါ။ ညစာ – ဆလတ်ရွတ်ပြုတ်နဲ့ အာလူး၊ Green tea တခွက် သောက်ပါ။
ကြက်ဥပြုတ်တလုံးမှာ ကယ်လိုရီ (၁၅၀)လောက်ပါတယ်။ အသားကနေ ကယ်လိုရီ (၁၂၀-၁၆၀)ကြား ဝငိနေတယ်။ ပန်းသီးတလုံးမှာ ကယ်လိုရီ ၁၀၀ လောက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကယ်လိုရီ (၁၀၀၀)လောက်သာ နေ့စဉ်ဝင်နေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သုံးရက်ပြီးရင် ဆက်မလုပ်ပါနဲ့။ ရက်အနည်းငယ်ခြားပါ။ အသက်ကြီးရင့်သူတွေလုပ်တဲ့အခါ သတိထားသင့်တယ်။ လူငယ်လူရွယ်တွေ လိုက်လုပ်နိုင်တယ်။ သေချာလုပ်နိုင်ရင် သုံးရက်အတွင်း ၃-၆ပေါင်ထိ ဝိတ်ကျစေနိုင်တယ်။ အမြန်ဝိတ်ချနည်းဖြစ်လို့ ဝိတ်ကျဖို့အတွက် အချိန်လည်းပေးနိုင် အလျင်လည်း မလိုဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် ဝိတ်ချနည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ, ဗဟုတုသ LeaveaComment on သှားစရာလာစရာရှိလို့ အမွနျဝိတျကခြငျြသူမြားအတှကျ သုံးရကျနဲ့ ဝိတျခနြညျး
Posted on October 5, 2021 October 5, 2021 by Tin Mg Shwe
သငျဟာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အဝေးပွေးကှငျးကို ရောကျလရှေိ့တဲ့သူဆို B6 ကဒျပြော့ (B6 မဟုတျ) နဲ့ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမှာပါ။အဝေးပွေး ကားဘေးမှာ ကားမူးပွဆေေး B6 ဘီစဈ ဆိုပွီး လိုကျရောငျးနတေဲ့ ဆေးကဒျပြော့ အကွညျရောငျထဲက ဆေးအဝါရောငျ အလုံးလေးတှကေို သငျဝယျသောကျဘူးကောငျးဝယျသောကျဘူးပါလိမျ့မယျ။
ကားမူးပွဆေေးဆို‌တာတော့ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ B6 လို့ပွောလိုကျရငျတော့ တကျတကျစငျအောငျလှဲ‌ပါတော့တယျ။ သူရဲ့ နာမညျအစဈအမှနျကတော့ Dimenhydrinate ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ Motion sickness လို့ချေါတဲ့ ကားမူး လှမေူးတာအတှကျတော့ အသုံးဝငျတဲ့ဆေးပါ။ ကား၊ ရထား မထှကျခငျ နာရီဝကျအလိုလောကျမှာ ကွိုသောကျထားရငျ ခရီးထှကျတဲ့အခါ မူးရမယျ့အစား မှေးခနဲ မှေးခနဲ သာဖွဈပွီး အနျခငျြတာကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။
B6 ရဲ့နာမညျအရငျးကတော့ Vitamin B6 or Pyridoxine ဖွဈပါတယျ။ သူဟာလဲ အမူးအမျောသကျသာစဖေို့ အထောကျအကူပွုပါတယျ။ ဒီဆေးနှဈခုရဲ့ ပုံပနျးသှငျပွငျကလညျး စာမပါရငျ ခြှတျစှတျတူပါတယျ။ နှဈခုလုံးက အဝါရောငျ အလုံးသေးသေးလေးတှပေါ။
တကယျတမျး ဒီဆေးနဈခုတာ အမူးအမျောသကျသာတာရယျ အဝါလုံးခငျြး တူတာရယျကလှဲရငျ ဘယျနရောမှ မတူပါဘူး။ ရမှောပြျောဝငျနိုငျတဲ့ B6 ဟာ မြားမြားသောကျရငျ ရူးရူး ဝါလာတာကလှဲလို့ ဘာမှ အန်တရာယျမရှိပါ။ သို့သျော ဇာတျလိုကျကြျောကွီး B6 ကဒျပြော့ (B6 မဟုတျ) Dymenhydrinate ‌ကတော့ မြားမြားသောကျမိရငျ ဂဈဂဈ ဂဈဂဈနအေောငျ တကျတတျပါတယျ။
ကားစီး ရထားစီး ခရီးသညျတှအေနနေဲ့ကတော့ တဈလုံးလောကျ ထပျပိုသောကျတာ ရှားတဲ့အတှကျ ပွသနာမဖွဈပမေယျ့ တကယျပွသနာဖွဈလာတာကတော့ ရပျကှကျထဲက ဆေးဆိုငျ ဆေးခနျးတှကေိုပါ ဒီအချေါအဝျေါက ရောကျလာပွီး တကယျ့ ဘီစဈသောကျရမယျ့သူတှကေပါ ဒါကို B6 အစဈအမှနျထငျပွီး သောကျလာကွတာပါ။ အထူးသဖွငျ့ TB ရောဂါရှိသူတှလေို ဘီစဈ အစဈအမှနျကို ဆှဲသောကျ‌‌နေ‌‌ရသူတှဟော ဒါကိုမှားပွီးသောကျနမေယျဆိုရငျ အဆငျမပွပေါဘူး။ အန်တရာယျမဖွဈရငျတောငျ လိုအပျတဲ့ အာရုံကွောအားဖွညျ့စတေဲ့ အကြိုးအာနိသငျကို ဆုံးရှုံးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သောကျသုံးတဲ့သူတှဟောလဲ ဒါဟာ B6 မဟုတျဘူးဆိုတာကို သိပွီးရှောငျကွငျသငျ့သလို ဆေးဆိုငျတှေ ဆေးခနျးဆေးပေးသူတှေ အနနေဲ့လညျး B6 ကဒျပြော့ ပေးပါလို့ လာဝယျသူတိုငျးကို ရော့အငျ့လို့မရောငျးလိုကျပဲ ဒါဟာ B6 မဟုတျကွောငျး‌တော့ ရှငျးပွပေးသငျ့ပါတယျ။ B6 အစဈအမှနျဟာ ဘူးလိုကျလာလရှေိ့ပွီး ဈေးနှုနျးလဲ ပိုသကျသာလရှေိ့ပါတယျ။ B6 အစဈအမှနျကို သောကျသုံးနိုငျကွပါစေ။
B6 မဟုတ်သော B6 ကဒ်ပျော့
သင်ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဝေးပြေးကွင်းကို ရောက်လေ့ရှိတဲ့သူဆို B6 ကဒ်ပျော့ (B6 မဟုတ်) နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အဝေးပြေး ကားဘေးမှာ ကားမူးပြေဆေး B6 ဘီစစ် ဆိုပြီး လိုက်ရောင်းနေတဲ့ ဆေးကဒ်ပျော့ အကြည်ရောင်ထဲက ဆေးအဝါရောင် အလုံးလေးတွေကို သင်ဝယ်သောက်ဘူးကောင်းဝယ်သောက်ဘူးပါလိမ့်မယ်။
ကားမူးပြေဆေးဆို‌တာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် B6 လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ တက်တက်စင်အောင်လွဲ‌ပါတော့တယ်။ သူရဲ့ နာမည်အစစ်အမှန်ကတော့ Dimenhydrinate ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Motion sickness လို့ခေါ်တဲ့ ကားမူး လှေမူးတာအတွက်တော့ အသုံးဝင်တဲ့ဆေးပါ။ ကား၊ ရထား မထွက်ခင် နာရီဝက်အလိုလောက်မှာ ကြိုသောက်ထားရင် ခရီးထွက်တဲ့အခါ မူးရမယ့်အစား မှေးခနဲ မှေးခနဲ သာဖြစ်ပြီး အန်ချင်တာကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
B6 ရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ Vitamin B6 or Pyridoxine ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာလဲ အမူးအမော်သက်သာစေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒီဆေးနှစ်ခုရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်ကလည်း စာမပါရင် ချွတ်စွတ်တူပါတယ်။ နှစ်ခုလုံးက အဝါရောင် အလုံးသေးသေးလေးတွေပါ။
တကယ်တမ်း ဒီဆေးနစ်ခုတာ အမူးအမော်သက်သာတာရယ် အဝါလုံးချင်း တူတာရယ်ကလွဲရင် ဘယ်နေရာမှ မတူပါဘူး။ ရေမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ B6 ဟာ များများသောက်ရင် ရူးရူး ဝါလာတာကလွဲလို့ ဘာမှ အန္တရာယ်မရှိပါ။ သို့သော် ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး B6 ကဒ်ပျော့ (B6 မဟုတ်) Dymenhydrinate ‌ကတော့ များများသောက်မိရင် ဂစ်ဂစ် ဂစ်ဂစ်နေအောင် တက်တတ်ပါတယ်။
ကားစီး ရထားစီး ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ကတော့ တစ်လုံးလောက် ထပ်ပိုသောက်တာ ရှားတဲ့အတွက် ပြသနာမဖြစ်ပေမယ့် တကယ်ပြသနာဖြစ်လာတာကတော့ ရပ်ကွက်ထဲက ဆေးဆိုင် ဆေးခန်းတွေကိုပါ ဒီအခေါ်အဝေါ်က ရောက်လာပြီး တကယ့် ဘီစစ်သောက်ရမယ့်သူတွေကပါ ဒါကို B6 အစစ်အမှန်ထင်ပြီး သောက်လာကြတာပါ။ အထူးသဖြင့် TB ရောဂါရှိသူတွေလို ဘီစစ် အစစ်အမှန်ကို ဆွဲသောက်‌‌နေ‌‌ရသူတွေဟာ ဒါကိုမှားပြီးသောက်နေမယ်ဆိုရင် အဆင်မပြေပါဘူး။ အန္တရာယ်မဖြစ်ရင်တောင် လိုအပ်တဲ့ အာရုံကြောအားဖြည့်စေတဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကို ဆုံးရှုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သောက်သုံးတဲ့သူတွေဟာလဲ ဒါဟာ B6 မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိပြီးရှောင်ကြင်သင့်သလို ဆေးဆိုင်တွေ ဆေးခန်းဆေးပေးသူတွေ အနေနဲ့လည်း B6 ကဒ်ပျော့ ပေးပါလို့ လာဝယ်သူတိုင်းကို ရော့အင့်လို့မရောင်းလိုက်ပဲ ဒါဟာ B6 မဟုတ်ကြောင်း‌တော့ ရှင်းပြပေးသင့်ပါတယ်။ B6 အစစ်အမှန်ဟာ ဘူးလိုက်လာလေ့ရှိပြီး ဈေးနှုန်းလဲ ပိုသက်သာလေ့ရှိပါတယ်။ B6 အစစ်အမှန်ကို သောက်သုံးနိုင်ကြပါစေ။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on B6 မဟုတျသော B6 ကဒျပြော့
ခရမျးခဉျြသီး တဈလုံးတညျးနဲ့ မကျြနှာပျေါက အမညျးစကျ၊ ခြှေးပေါကျကယျြ၊ အဆီပွနျတာတှေ ပြောကျတဲ့နညျး
Posted on October 4, 2021 October 4, 2021 by Tin Mg Shwe
ခရမျးခဉျြသီး တဈလုံးတညျး နဲ့ မကျြနှာပျေါက အမညျးစကျ ဝကျခွံ အဆီပွနျ တာတှပြေောကျတဲ့နညျး
မကျြနှာသဈပွီးတဲ့အခြိနျ ခရမျးခဉျြသီးအရညျမကျြနှာအနှံ့ပါးပါးလေးလိမျးပွီးငါးမိနဈအကွာမှာ ရပွေနျဆေးခပြေးပါ။ ဒါကို ညအိပျရာဝငျခါနီးတိုငျး နစေ့ဉျမပကျြမကှကျလုပျပေးသှားရငျ မကျြနှာအဆီပွနျတာကို သကျသာသှားစပေါလိမျ့မယျ။
ခရမျးခဉျြသီးကိုထကျခွမျးခွမျးပွီး မကျြနှာကိုတိုကျရိုကျပှတျတိုကျပေးပါ။ အဲ့လိုပှတျတိုကျပေးတာက ခြှေးပေါကျတှထေဲမှာပိတျနတေဲ့ အညဈအကွေးတှကေို သနျ့စငျစပွေီး တိုနာလိမျးပေးသလို ဖွဈစတောကွောငျ့ ခြှေးပေါကျ ကယျြတာတှကေို ပြောကျကငျးစပေါတယျ။၁၅မိနဈလောကျပှတျတိုကျပွီးရငျ ရအေေးနဲ့ဆေးခပြေးလိုကျပါ။ နစေ့ဉျပုံမှနျလုပျပေးရမှာပါ။
အသားအရပေိုကွညျပွီး၊ ပိုဖွူလာစမေယျ့ ခရမျးခဉျြသီးတဈလုံးနဲ့ ပြားရညျတဈဇှနျးတို့ကို ရောမှပွေီး မကျြနှာအနှံ့လိမျးပေးကာ ၁၅မိနဈလောကျနရေငျ မကျြနှာသဈပေးပါ။ သုံးရကျတဈကွိမျ ပုံမှနျလုပျပေးသှားရုံနဲ့ တဈလလောကျကွာရငျ မကျြနှာလေးက သိသိသာသာပိုဖွူလာပွီး ပိုလညျး ကွညျလငျလာပါလိမျ့မယျ။
ခရမျးခဉျြသီးတဈလုံးကို သံပရိုရညျနညျးနညျးရောပွီး အမညျးစကျနဲ့ အမာရှတျတှရှေိတဲ့နရောမှာ ပါးပါးလေးလိမျးပေးပါ။ ၁၀ မိနဈလောကျစောငျ့ပွီး ရအေေးနဲ့မကျြနှာပွနျသဈလိုကျပါ။ နစေ့ဉျမပကျြမကှကျလုပျပေးသှားရငျ အမညျးစကျတှေ အမာရှတျတှေ လုံးဝအရှငျးပြောကျသှားပါလိမျ့မယျ။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ, ဗဟုတုသ LeaveaComment on ခရမျးခဉျြသီး တဈလုံးတညျးနဲ့ မကျြနှာပျေါက အမညျးစကျ၊ ခြှေးပေါကျကယျြ၊ အဆီပွနျတာတှေ ပြောကျတဲ့နညျး
(၁၀)ရကျနှငျ့ ညှငျးပြောကျဆေး ဒနျ့ကြှဲပငျ
Posted on October 2, 2021 October 2, 2021 by Tin Mg Shwe
ညှငျး နဲ့ပတျသကျပွီး မေးထားလို့ ရှာဖှမြှေဝပေေးခွငျးသကျသကျ ဖွဈပါတယျ။ လူအတျောမြားမြား အဖွဈမြားကွ၏။ ဆိုရပါသျော အရပွေားမှိုရောဂါ ဖွဈသညျ။ မိမိအသား အရောငျထကျ ပို၍ဖွူနခွေငျး၊ ပို၍ရငျ့နခွေငျးဖွဈသညျ။ အခြိနျကွာမွငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ တဖွညျးဖွညျး ပှားလာတတျလသေညျ။ ရငျးဘတျ၊ ပါးပွငျ၊ ဂုတျသား၊ ကြောပွငျ၊ လကျမောငျး၊ လညျပငျးနရောအနှံ့ အကှကျအကှကျမြား ပြံ့ပှားနတေတျသညျ။
ယောကျြား၊ မိနျးမတို့ ညှငျးပေါကျ၍ အလှပြောကျပွီး စိတျညဈသူတို့ မြားကွသညျ။ ရုပျလေးတော့ခြောပါရဲ့ ညှငျးတှေ ပေါကျနတောဆိုးတယျ ဒီလိုမြိုးပွောတတျကွသညျကိုး..။ ညှငျးရောဂါသညျ Mallasseziaဟုချေါသောမှို တဈမြိုးကွောငျ့ ဖွဈပှားသညျဟု ဆိုပါသညျ။ နာကငျြမှု မရှိသျောလညျး တဈခါတဈရံယားယံတတျပါသညျ။ ခတျေပျေါဆေးဝါးမြား ဝယျယူရနျခကျခဲသူတို့ အတှကျ ညှငျးကို ပြောကျကွောငျးဆေးနညျးကောငျးလေးအား တငျပွပါအံ့…။
ဒနျးကြှဲပငျစမြေ့ားကို မွအေိုးတှငျမီးကြှမျးအောငျလှျောပွီး အမှုနျ့ထောငျးပါ။ ထိုဒနျ့ကြှဲမှုနျ့နှငျ့နှမျးဆီစဈစဈလေးအား ရောမှပွေီး ညအိပျရာဝငျတိုငျး လိမျးပေးရနျဖွဈပါသညျ။ (၁၀)ရကျ တိတိဇှဲရှိရှိလေး လိမျးပေးပါက ခန်ဓာကိုယျပျေါမှ ညှငျးမြား ပြောကျပွီး ပငျကိုယျအလှပွနျ၍ ရနိုငျပါကွောငျး တငျပွလိုကျပါသညျ။ နှမျးဆီ အခကျတှသေူ့တို့ သံပုရာရညျဖွငျ့လိမျးပါရနျ။
ဒနျ့ကြှဲပငျအား ရှမွေနျမာတို့အထူးမိတျဆကျရနျ မလိုပါ၊ သိပွီးအပငျဖွဈပါသညျ။
လကျတငျဖွငျ့ Cassia Toraဟုချေါပါသညျ။ အစသေ့ညျပူ၍ ခါးသကျသောအရသာ ရှိပါသညျ။ အရှကျကို ဟငျးခကျြစားခွငျး၊ အစကေို့ သံပုရာရညျဖွငျ့ ကွိတျပွီးလိမျးပါက အရပွေားရောဂါတို့ ပြောကျပါသညျ။ မကျြစိအတှကျ အစကေို့ သှေး၍ကှငျးခွငျး၊ အစကေို့ ကြိုပွီးသောကျပါက မကျြစိပိုးထခွငျး၊ ယားခွငျးကို သကျသာစပေါသညျ။ အနာငနျးလိုကျက အစကေို့ သှေးပွီး လိမျးခွငျး၊ သောကျခွငျးဖွငျ့ ပြောကျကငျးနိုငျပါသညျ။
(၁၀)ရက်နှင့် ညှင်းပျောက်ဆေး ဒန့်ကျွဲပင်
ညှင်း နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးထားလို့ ရှာဖွေမျှဝေပေးခြင်းသက်သက် ဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများ အဖြစ်များကြ၏။ ဆိုရပါသော် အရေပြားမှိုရောဂါ ဖြစ်သည်။ မိမိအသား အရောင်ထက် ပို၍ဖြူနေခြင်း၊ ပို၍ရင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ တဖြည်းဖြည်း ပွားလာတတ်လေသည်။ ရင်းဘတ်၊ ပါးပြင်၊ ဂုတ်သား၊ ကျောပြင်၊ လက်မောင်း၊ လည်ပင်းနေရာအနှံ့ အကွက်အကွက်များ ပျံ့ပွားနေတတ်သည်။
ယောက်ျား၊ မိန်းမတို့ ညှင်းပေါက်၍ အလှပျောက်ပြီး စိတ်ညစ်သူတို့ များကြသည်။ ရုပ်လေးတော့ချောပါရဲ့ ညှင်းတွေ ပေါက်နေတာဆိုးတယ် ဒီလိုမျိုးပြောတတ်ကြသည်ကိုး..။ ညှင်းရောဂါသည် Mallasseziaဟုခေါ်သောမှို တစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ နာကျင်မှု မရှိသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံယားယံတတ်ပါသည်။ ခေတ်ပေါ်ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲသူတို့ အတွက် ညှင်းကို ပျောက်ကြောင်းဆေးနည်းကောင်းလေးအား တင်ပြပါအံ့…။
ဒန်းကျွဲပင်စေ့များကို မြေအိုးတွင်မီးကျွမ်းအောင်လှော်ပြီး အမှုန့်ထောင်းပါ။ ထိုဒန့်ကျွဲမှုန့်နှင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်လေးအား ရောမွှေပြီး ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း လိမ်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ (၁၀)ရက် တိတိဇွဲရှိရှိလေး လိမ်းပေးပါက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ ညှင်းများ ပျောက်ပြီး ပင်ကိုယ်အလှပြန်၍ ရနိုင်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။ နှမ်းဆီ အခက်တွေ့သူတို့ သံပုရာရည်ဖြင့်လိမ်းပါရန်။
ဒန့်ကျွဲပင်အား ရွှေမြန်မာတို့အထူးမိတ်ဆက်ရန် မလိုပါ၊ သိပြီးအပင်ဖြစ်ပါသည်။
လက်တင်ဖြင့် Cassia Toraဟုခေါ်ပါသည်။ အစေ့သည်ပူ၍ ခါးသက်သောအရသာ ရှိပါသည်။ အရွက်ကို ဟင်းချက်စားခြင်း၊ အစေ့ကို သံပုရာရည်ဖြင့် ကြိတ်ပြီးလိမ်းပါက အရေပြားရောဂါတို့ ပျောက်ပါသည်။ မျက်စိအတွက် အစေ့ကို သွေး၍ကွင်းခြင်း၊ အစေ့ကို ကျိုပြီးသောက်ပါက မျက်စိပိုးထခြင်း၊ ယားခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ အနာငန်းလိုက်က အစေ့ကို သွေးပြီး လိမ်းခြင်း၊ သောက်ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on (၁၀)ရကျနှငျ့ ညှငျးပြောကျဆေး ဒနျ့ကြှဲပငျ
အိပျမပြျောခွငျး၊ နှလုံးသညျးခွေ အားနညျးခွငျး၊ စားမ၀ငျခွငျးမြားအတှကျ ဆေးစှမျးထကျမွကျ ဒနျ့ကြှဲရှကျ မိုးကလြကျဖကျရှကျ
ဆေးစှမျးထကျမွကျ ဒနျ့ကြှဲရှကျ မိုးကလြကျဖကျရှကျ
ဒနျ့ကြှဲပငျနှငျ့ အိပျမပြျောဘူးလား၊ နှလုံးသညျးခွေ အားနညျးနလေား၊ စိတျမငွိမျဖွဈနလေား၊ စားမဝငျဘူးလား။
အိပျမပြျောဘူးလား/ နှလုံးသညျးခွေ အားနညျးနလေား/ စိတျမငွိမျဖွဈနလေား/ စားမဝငျဘူးလား။ ငှကေုနျခံမနပေါနဲ့ လမျးဘေးသမားတျောနဲ့ တှလေို့ကျပါ။ လမျးဘေးသမားတျောဟူသညျကား လမျးဘေးမှ အညတွဘဝနဲ့ မလှမပ နထေိုငျနရေသူ ”ဒနျ့ကြှဲပငျ” သာဖွဈပါသညျ။ အရိုးခံဆိုပမေယျ့ အမြိုးမှနျ၍ အဖိုးတနျလှပါသညျ။ဒနျ့ကြှဲပငျဟာ အိပျပြျောစသေောသတ်တိ၊ သညျးခွပေကျြရောဂါသှေးပကျြ ထိတျလနျ့တတျသောရောဂါ၊ နှလုံးအားနညျး ရောဂါ တို့ကို သူတဈမြိုးတညျး ပြောကျကငျးစနျေုငျလောကျအောငျ ဂုဏျသတ်တိထူးသော ဆေးကောငျးကွီးတဈလကျဖွဈပါသညျ။ ဆေးမွီးတိုမဟုတျပါ မွဈခငျြးပွီးဆေးပါ။
ဒနျ့ကြှဲရှကျကို ပွုတျပွီး လကျသုတျသုပျစားကွသညျ။ တို့စရာအဖွဈ စားကွသညျ။ မိုးကြ လဖကျဟူ၍ပငျ တငျစားချေါဝျေါကွသညျ။ အလှနျအရသာရှိသော အပငျဖွဈပါသညျ။ မွနျမာ့မွမှောကွီး မွနျမာ့မွမှောမှေး မွနျမာ့ပထဝီဝငျအနအေထားအရ ကွီးပွငျးလာကွတဲ့ မွနျမာတှအေတှကျ မွနျမာပွညျက သဈဥသဈဖု ဆေးမွဈတှကေသာ အထိရောကျဆုံး အထောကျအကူအပွုဆုံး အကောငျးဆုံးဖွဈပါသညျ။
ဒနျ့ကြှဲပငျနဲ့ပါတျသကျ၍ ”ဒနျ့ကြှဲပငျ ပုခကျလှဲ”ဟူသော စကားပုံကို လူတိုငျးကွားဖူးကွပမေညျ။ ဒီအပငျရဲ့ အမညျဟာ မွနျမာတိုငျးနဲ့ မစိမျးသော ရငျးနှီးပွီးသားပငျ ဖွဈပါသညျ။ ကဲ ပွောနကွောပါတယျ။ ဆေးအသုံးပွုပုံလေး ဆကျကွပါစို့။
၁။ အိပျမပြျောပါက ဒနျ့ကြှဲရှကျကို ၃ခှကျတဈခှကျတငျကြို၍ သကွားခပျ၍ သောကျပါ။ ဒိုဘာလာသကွားနှငျ့ သောကျပါက ပိုကောငျးပါသညျ။ (ရနှေေးကွမျး ပနျးကနျ တဈလုံးသောကျပါ) ၂။ သှေးလခွေောကျခွားခွငျး ၃။ စိတျမကွညျလငျခွငျး ၄။ အားနညျးခွငျး ၅။ နှလုံးခုနျ ရငျတုနျမောပနျးခွငျး ၆။ ဆီးဝမျးမညီညှတျခွငျး ၇။ နှလုံးမခိုငျ ရှံရှာတတျခွငျး တို့ကို အထကျပါနညျးအတိုငျး သုံးခှကျတဈခှကျတငျ ကြိုလြှကျ သကွားခပျသောကျပါ။ သုံးခါလောကျ သောကျလိုကျလြှငျ သိသာထူးခွား ပါလိမျ့မညျ။ စာတှမေ့ဟုတျ လကျတှဖွေ့ဈပါသညျ။
အစာလညျးဆေး ဆေးလညျးအစာဆိုသလို အပနျးမကွီးပါက တဈပါတျလြှငျ ၂ရကျမြှ တို့စရာအဖွဈစားကွပါလို့ ကြှနျတေျာ့ မိဘတှကေို တိုကျတှနျးပါရစေ။ အားလုံးကနျြးမာ ခမျြးသာစှာ သာသနာပွုနိုငျကွပါစေ။
Credit – ဆရာကြျောလငျးအောငျ
ဆေးစွမ်းထက်မြက် ဒန့်ကျွဲရွက် မိုးကျလက်ဖက်ရွက်
ဒန့်ကျွဲပင်နှင့် အိပ်မပျော်ဘူးလား၊ နှလုံးသည်းခြေ အားနည်းနေလား၊ စိတ်မငြိမ်ဖြစ်နေလား၊ စားမဝင်ဘူးလား။
အိပ်မပျော်ဘူးလား/ နှလုံးသည်းခြေ အားနည်းနေလား/ စိတ်မငြိမ်ဖြစ်နေလား/ စားမဝင်ဘူးလား။ ငွေကုန်ခံမနေပါနဲ့ လမ်းဘေးသမားတော်နဲ့ တွေ့လိုက်ပါ။ လမ်းဘေးသမားတော်ဟူသည်ကား လမ်းဘေးမှ အညတြဘဝနဲ့ မလှမပ နေထိုင်နေရသူ ”ဒန့်ကျွဲပင်” သာဖြစ်ပါသည်။ အရိုးခံဆိုပေမယ့် အမျိုးမှန်၍ အဖိုးတန်လှပါသည်။ဒန့်ကျွဲပင်ဟာ အိပ်ပျော်စေသောသတ္တိ၊ သည်းခြေပျက်ရောဂါသွေးပျက် ထိတ်လန့်တတ်သောရောဂါ၊ နှလုံးအားနည်း ရောဂါ တို့ကို သူတစ်မျိုးတည်း ပျောက်ကင်းစေန်ုင်လောက်အောင် ဂုဏ်သတ္တိထူးသော ဆေးကောင်းကြီးတစ်လက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးမြီးတိုမဟုတ်ပါ မြစ်ချင်းပြီးဆေးပါ။
ဒန့်ကျွဲရွက်ကို ပြုတ်ပြီး လက်သုတ်သုပ်စားကြသည်။ တို့စရာအဖြစ် စားကြသည်။ မိုးကျ လဖက်ဟူ၍ပင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အလွန်အရသာရှိသော အပင်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့မြေမှာကြီး မြန်မာ့မြေမှာမွေး မြန်မာ့ပထဝီဝင်အနေအထားအရ ကြီးပြင်းလာကြတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် မြန်မာပြည်က သစ်ဥသစ်ဖု ဆေးမြစ်တွေကသာ အထိရောက်ဆုံး အထောက်အကူအပြုဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ဒန့်ကျွဲပင်နဲ့ပါတ်သက်၍ ”ဒန့်ကျွဲပင် ပုခက်လွှဲ”ဟူသော စကားပုံကို လူတိုင်းကြားဖူးကြပေမည်။ ဒီအပင်ရဲ့ အမည်ဟာ မြန်မာတိုင်းနဲ့ မစိမ်းသော ရင်းနှီးပြီးသားပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကဲ ပြောနေကြာပါတယ်။ ဆေးအသုံးပြုပုံလေး ဆက်ကြပါစို့။
၁။ အိပ်မပျော်ပါက ဒန့်ကျွဲရွက်ကို ၃ခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၍ သကြားခပ်၍ သောက်ပါ။ ဒိုဘာလာသကြားနှင့် သောက်ပါက ပိုကောင်းပါသည်။ (ရေနွေးကြမ်း ပန်းကန် တစ်လုံးသောက်ပါ) ၂။ သွေးလေခြောက်ခြားခြင်း ၃။ စိတ်မကြည်လင်ခြင်း ၄။ အားနည်းခြင်း ၅။ နှလုံးခုန် ရင်တုန်မောပန်းခြင်း ၆။ ဆီးဝမ်းမညီညွတ်ခြင်း ၇။ နှလုံးမခိုင် ရွံရှာတတ်ခြင်း တို့ကို အထက်ပါနည်းအတိုင်း သုံးခွက်တစ်ခွက်တင် ကျိုလျှက် သကြားခပ်သောက်ပါ။ သုံးခါလောက် သောက်လိုက်လျှင် သိသာထူးခြား ပါလိမ့်မည်။ စာတွေ့မဟုတ် လက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်။
အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာဆိုသလို အပန်းမကြီးပါက တစ်ပါတ်လျှင် ၂ရက်မျှ တို့စရာအဖြစ်စားကြပါလို့ ကျွန်တော့် မိဘတွေကို တိုက်တွန်းပါရစေ။ အားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာစွာ သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on အိပျမပြျောခွငျး၊ နှလုံးသညျးခွေ အားနညျးခွငျး၊ စားမ၀ငျခွငျးမြားအတှကျ ဆေးစှမျးထကျမွကျ ဒနျ့ကြှဲရှကျ မိုးကလြကျဖကျရှကျ
မကျြစိနာ၊ မကျြလုံးစပျ၊ မကျြရညျပူကခြွငျးနှငျ့ မကျြစိမှုနျခွငျး တို့ကို အမွနျဆုံး သကျသာစတေဲ့ ဆေးနညျး
Posted on September 30, 2021 September 30, 2021 by Tin Mg Shwe
မကျြစိနာ၊ မကျြလုံးစပျ၊ မကျြရညျပူကခြွငျးနှငျ့ မကျြစိမှုနျခွငျး တို့ကို အမွနျဆုံး သကျသာစတေဲ့ ဆေးနညျးလေးကိုမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။ ဆေးနညျးလေးက လှယျလညျးလှယျကူသလို ဆေးဖျောစပျရာမှာ ပါဝငျတဲ့ ပစ်စညျးကလညျး ရှာဖှရေ လှယျကူပါတယျ။ မူရငျးနညျး မှာတော့ ဖနျခါးသီး အခွောကျပါ ။
မိတျဆှတေို့အနနေဲ့ ဖနျးခါးသီးအခွောကျမရလြှငျ အစိမျးကိုထောငျးပွီး ဆနှငျးမှုနျ့အနညျးငယျထညျ့ ရအေနညျးငယျထညျ့ပီး ညအိပျခါနီး မကျြခှံမှာ လူးပီးအိပျ။ တပတျကိုသုံးရကျလောကျလုပျ။ လူးပီးတာနဲ့မကျြလုံးကို အေးနတောပဲ။ မကျြလုံး ကိုကျတာခဲတာကအစ ပြောကျပါတယျ။ fb ပျေါမှာတှလေို့ကနြျောစမျးကွညျ့ ကွညျ့ပီးတကယျဟုတျလို့ မြှဝပေေးလိုကျရပါသညျ။
မျက်စိနာ၊ မျက်လုံးစပ်၊ မျက်ရည်ပူကျခြင်းနှင့် မျက်စိမှုန်ခြင်း တို့ကို အမြန်ဆုံး သက်သာစေတဲ့ ဆေးနည်းလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဆေးနည်းလေးက လွယ်လည်းလွယ်ကူသလို ဆေးဖော်စပ်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းကလည်း ရှာဖွေရ လွယ်ကူပါတယ်။ မူရင်းနည်း မှာတော့ ဖန်ခါးသီး အခြောက်ပါ ။
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ဖန်းခါးသီးအခြောက်မရလျှင် အစိမ်းကိုထောင်းပြီး ဆနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ထည့် ရေအနည်းငယ်ထည့်ပီး ညအိပ်ခါနီး မျက်ခွံမှာ လူးပီးအိပ်။ တပတ်ကိုသုံးရက်လောက်လုပ်။ လူးပီးတာနဲ့မျက်လုံးကို အေးနေတာပဲ။ မျက်လုံး ကိုက်တာခဲတာကအစ ပျောက်ပါတယ်။ fb ပေါ်မှာတွေ့လို့ကျနော်စမ်းကြည့် ကြည့်ပီးတကယ်ဟုတ်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ရပါသည်။
Posted in ကနျြးမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on မကျြစိနာ၊ မကျြလုံးစပျ၊ မကျြရညျပူကခြွငျးနှငျ့ မကျြစိမှုနျခွငျး တို့ကို အမွနျဆုံး သကျသာစတေဲ့ ဆေးနညျး